Saadaasha Michael Owen Ee Kulamada Premier League Ee Toddobaadkan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Saadaasha Michael Owen Ee Kulamada Premier League Ee Toddobaadkan
Saadaasha Michael Owen Ee Kulamada Premier League Ee Toddobaadkan
Michael Owen ayaa saadaal ka bixiyey kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan, gaar ahaan ciyaaraha waaweyn.
Manchester United iyo Arsenal oo garoonka Old Trafford ku ballansan Axadda ayaa ah ciyaarta ay sida weyn ishu u hayso, iyadoo Red Devils ay ku jirto kaalinta 15aad oo haddii laga badiyo ay hoos uga sii dhici karto booskaas.
Arsenal ayaa 1-0 lagaga soo badiyey labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, halka Manchester United ay barbarro goolal la’aan ah soo gashay kulankii ugu dambeeyey oo ay Chelsea wada ciyaareen.
Manchester United iyo Arsenal ayaa laduba guulo la’aantooda horyaalka waxa uga dambaysay libinihii ay ka gaadheen tartamada Champions League iyo Europa League usbuucan.
Michael Owen oo saadaaliyey kulamadan ayaa waxa uu ugu bushaareeyey Mikel Arteta in ugu yaraan hal dhibic uu kala soo laaban doono Old Trafford, isla markaana uu labadii guul-darro ee xidhiidhka ahaa ee Manchester City iyo Leicester City ay u xambaariyeen.
Liverpool oo garoonkeeda Anfield ku qaabilaysa West Ham United ayaa uu Owen saadaaliyey inay noqon doonto ciyaar goolal ay kala dhaliyaan labada kooxoodba, balse ay guuleysan doonto Liverpool, iyadoo uu xusay in Sadio Mane uu shabaqa taaban doono.
Chelsea ayaa uu iyadana ugu bushaareeyey inay guul weyn ka gaadhi doonto Burnley, halka Man City uu iyagana sheegay inay ka takhalusi doonaan Sheffiel United.
Previous articleUN panel says N. Korean mortar apparently used in terrorist attack in Somalia
Next articleDEG DEG: Toogasho ka dhacday magaalada Lyon ee dalka Faransiiska